भेडो शैलीमा नेताको नेताहरुको पछि लाग्ने लाखौं लम्पट कार्यकर्ता यो देशको संवृद्धिको बाधक : संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भेडो शैलीमा नेताको नेताहरुको पछि लाग्ने लाखौं लम्पट कार्यकर्ता यो देशको संवृद्धिको बाधक : संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य
काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पार्टीका नेताहरुको पछि लाग्ने लाखौं लम्पट कार्यकर्ता यो देशको संवृद्धिको बाधक भएको बताएका छन् । उनीहरुलाई डा. भीमार्जुनले भेडो संज्ञा समेत दिएका छन् ।
बेहुली लिन जन्ती घर पुग्दा घरमा ताल्चा, सबैको मोबाइल अफ..